युगल जोडी आ’गो मा अंकमाल गरेर मृ त्यु रोजेको भन्ने घटनाको वास्तवि, कता खुल्दा सबै चकित ! – Online Saptarangi
युगल जोडी आ’गो मा अंकमाल गरेर मृ त्यु रोजेको भन्ने घटनाको वास्तवि, कता खुल्दा सबै चकित !
October 19, 2020 October 19, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on युगल जोडी आ’गो मा अंकमाल गरेर मृ त्यु रोजेको भन्ने घटनाको वास्तवि, कता खुल्दा सबै चकित !
‘प्रेम अन्धो हुन्छ’ हामी धेरैले सुनेका छौँ । अर्को महत्वपूर्ण भनाई, ‘लडाँई र मायामा सबथोक जाय’ज हुन्छ ।’ यस्तै एक घटना अहिले बाहिर आएको छ । भारतको आन्ध्र प्रदेशको विजयवाडाबाट एक जोडीको दुःखद अ’न्त्य भएको छ ।
त्यहाँ एक युगल जोडीले गरेको हर्कतले सबैलाई हैरान पारेको छ । युवती अहिले मात्रै २४ वर्ष उमेरकी थिइन, उनी कोभिड–१९ सेन्टरमा नर्सको रूपमा काम गर्थिन् । यस घटनामा युवकको पनि मृ’त्यु भएको छ ।
वास्तवमा घटना के भने आरती र अंकीत गत चार बर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए । यस बीच, ती दुई बीच केही मनमुटाव भएको थियो । त्यसपछि आरती र अंकीतले सम्बन्ध समाप्त गर्ने निर्णयमा पुगे । आरतीले अंकीतसँगको सम्बन्ध समाप्त गरेर आफ्नो जीवन आरामले जीउन थालिन् ।
तर अंकीत उक्त निर्णयमा टिक्न तयार थिएनन् । उनले आरतीलाई विवाहको लागि निरन्तर भन्न थाले । यस बाहेक, अंकीतले आरतीलाई निरन्तर फेरी पछ्याउन थाले । अंकीतको यस्तो व्यवहारले आरती धेरै दुखी भइन् ।
हैरान भएपछि आरतीले अंकीतका विरुद्ध प्रहरी चौकीमा गएर निवेदन दर्ता गराउने निर्णय गरिन् । यही ५ अक्टुबरमा, आरती आफ्नो पूर्वप्रेमी अंकीतसँग रिसाएर विजयवाडाको गभर्नपेट प्रहरी चौकीमा निवेदन दर्ता गर्न गइन् ।
आरतीको निवेदनपछि प्रहरीले तुरुन्त बोलाएर अंकीतलाई आउँदा दिनहरुमा पछ्याउने काम नगर्नु भन्दै चेतावनी दिएर छोड्यो । अंकीतले त्यसपछि एउटा वचन दिए, जसमा उनले अबदेखि आरतीलाई नपछ्याउने बताएका थिए । त्यसपछि आरतीले पनि निवेदन फिर्ता लिईन् । यसरी उक्त उजुरी समाप्त गरियो । तर आरतीलाई थाहा थिएन कि यस निवेदनको नतिजा एकदम भयानक हुनेछ ।
आरती सोमबार कामबाट घर फर्कदै थिईन् । त्यस समयमा अंकीत उनको पछि–पछि कराउँदै आए । यसबीचमा उनीहरु बीचमा विवाद पनि भयो । अंकीत, आरती प्रहरी चौकीमा पुगेको कुराले असाध्यै रिसाएका थिए । केहि बेरमा, कुरा यत्ति धेरै भयो कि अंकीतले पे’ट्रोल आ’रतीमाथि ख’न्याए’र आ’गो बा’ले ।
आ’गो लागेपछि आरतीले अंकीतलाई पनि जोडले तानेर अंगालो हालिन् । आ’गोले उनीहरु दुबैलाई नराम्ररी क्षति गरेको थियो । प्रहरीका अनुसार उनीहरु चिच्याएको आवाज सुनेर त्यहाँ मान्छेहरु आएका थिए । स्थानीयले आ’गो निभाएर उनीहरुलाई अस्पतालमा भर्ना गरे तर उपचारको क्रममा दुबैको मृ’त्यु भयो ।
नोटः हामीले माथि प्रयोग गरेका नाम (आरती, अंकीत) परिवर्तन गरिएको काल्पिनक नामहरु हुन् । यस घटनामा ज्यान गुमाउनेहरुको नाम प्रहरीले विशेष कारण देखाउँदै सार्वजनिक गरेको छैन । अहिलेको समयमा युवा युवतीहरु प्रेममा हराएर आफ्नो जीवन दिन पनि पछि पर्दैनन् ।
त्यसलाई केही हदसम्म रोक्नका लागि सहयोगी हुन्छ कि भन्ने लागेर हामीले यो सामाग्री तयार पारेका हौँ । यसरी भएको मृ’त्युलाई मान्छेहरु बहादुरी मान्दैनन्, यो एक कायर काम हो । त्यसकारण जुनसुकै समस्या भए पनि डटेर सामना गर्न सिक्नुहोस्, मृ’त्यु नै समस्याको समाधान होईन । आफुले पढेपछि सबैंको जानकारीका लागि सक्दो सेयर गर्नुहोला ।
अमेरिकामा श क्तिशा ली भूक म्प, सुना मीको चेतावनी
चर्चित बलिउड नायिका काजल विवाहको तयारीमा, यि युवकसंग कस्दैछन् लगन गाँठो